Xilal magacaabis Qabyaaladeysan oo saameyn ku yeelatey Ciidamada Puntland [Sabab]
GAROWE- Tan iyo markii Madaxweyne Gaas isbadalo ku sameeyey Agaasime waxeedyada maaliyada iyo maamulka wasaaradaha Puntland ayaa waxaa soo kordhaya welwelka shacabka ka qabo danaha mas’uulka ugu sareeya xafiiska Madaxtooyada ka leeyahay xilalka uu magacaabayo xiligaan kala guurka ah.
Madaxweyne Gaas oo isagu isku baho hoose kawada tirsan yihiin xisaabiyaha cusub marka la eego qaabka wada dhalasho ee beel weynta Cumar Maxamuud ayaa talaabada uu qaadey sida warsidaha GO ogaadey waxaa ay saameyn ku yeelatey ciidamo ku sugan jiida hore ee Tukaraq.
Madaxweyne Gaas oo isku Shaan-dhaynaya golaha Wasiirrada Puntland
Puntland 25.02.2017. 22:57
GAROWE, Puntland- Wararka uu Warsidaha Garowe Online ka helayo ilo lagu kalsoonayahay oo ka agdhow Madaxtooyada Puntland, ayaa sheegaya in Madaxweyne Gaas qorshaynayo isku Shaan-dhayn uu ku samayn doono golahiisa wasiirrada.
Tallaabadan oo war rasmi ah laga hayn x ...
Abaar ku dhufatay gobollada ay isku hayaan Puntland iyo Somaliland
Somaliland 22.02.2019. 16:42
Wasiir baaq u diray ciidamada Puntland ee ku sugan aagga Tukaraq [DAAWO]
Puntland 10.01.2019. 23:43
Wafdi caalami ah oo Muuse Biixi kala hadlay colaadda Somaliland iyo Puntland
Somaliland 11.11.2018. 23:16
Ergayga UN-ka oo Biixi kala hadlay Colaadda Tukaraq, Wadahadalka DF
Somaliland 04.11.2018. 13:36
UN-ka oo Gaas kala hadlay Colaadda Tukaraq iyo khilaafka kala dhaxeeya DF
Puntland 03.11.2018. 12:25
Qorshe lagu carqaladeynayo doorashada Puntland oo la isku khilaafey
Puntland 15.10.2018. 22:39
Taliyaha Ciidamada Puntland oo la filayo in xilka laga qaado
Puntland 13.10.2018. 00:04
Urur caalami ah oo cambaareeyay xariga Somaliland ee laba Telefishin 20.06.2019. 07:53
Askari la waayey kadib weerarkii AlShabaab ee Wajeer oo la helay 20.06.2019. 07:32
Golaha Shacabka oo sharci ansixiyey xili fadhiga Aqalka Sare uu baaqdey 19.06.2019. 19:11
Rag loo haystay weerarkii Jamaacada Garissa oo dambiga lagu helay 19.06.2019. 17:48
Deni: UNICEF waxqabadkeeda haku saleyso baahiyaha jira 19.06.2019. 17:26
Deni oo maamul cusub oo ku meel gaar ah u magacaabey Buurtinle 19.06.2019. 16:30